Mee ya n'onwe gị | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Mee ya n'onwe gị
Akuku okpokoro okpomoku maka oyi na-eme ya n'onwe gị
Na mmalite nke ihu igwe oyi, ụlọ nchebe nke ime ụlọ na-amalite imekpa anyị ahụ. Ma ebe ọ bụ na ego ịba uru na-eto eto, ọtụtụ ndị mmadụ na-atụgharị uche na nsogbu nke ikpuchi ọkụ. Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ọkụ ọkụ na-ada na windo ma nwee ike ịdị iche site na 1/3 ruo 1/2. Nsogbu a na-eche ihu ọ bụghị naanị site n'aka ndị nwere windo windo ochie, kamakwa site na plastik.
Akụkụ nke usoro ihe osise dị iche iche: ihe ngwọta nke nsogbu metụtara ya
Ebube - ihe mkpuchi kachasị mma maka mgbidi na ụlọ elu. Ọnụ ala dị ala, ụdị ụcha dị iche iche, nhịacha ngwa ngwa na nchekwa chọpụta nnukwu ọchịchọ maka ha. Nanị ajụjụ bụ usoro nchịkọta. Esi mee ya n'ụzọ ziri ezi - anyị ga-ekwukwa banyere nke a. Ịkwadebe mgbidi Ihe mbụ ịmalite bụ nkwadebe nke mgbidi ahụ.
Kedu otu esi edozi ụlọ maka Afọ Ọhụrụ na Christmas na aka ha
Naanị ụbọchị ole na ole ga-adị tupu Afọ Ọhụrụ, nke pụtara ọtụtụ, ọ bụrụ na ọ dị mma, mgbalị. Ịhọrọ osisi Krismas ma chọọ ya mma, n'echefughị ​​banyere ime ụlọ - ọrụ ahụ dị oke njọ: ebe a, e nwere ụfọdụ iwu na ụkpụrụ. Oge eruola ịchọta nke ndị. Ụdị ọdịmma nke ụlọ Ezigbo àgwà nke ezumike na ụdị ha dị ugbu a si Europe bịa: na-ekwu maka osisi Krismas, akara na ahịhịa.
Ọchịchị ọhụrụ nke Afọ Ọhụrụ
Na nso nke Ememe Afọ Ọhụrụ, ka a na-ahụ ụdị ihe ịrịba ama niile, ihe nrịbama dị mma na ihe ịchọ mma dị iche iche n'okporo ámá. Foto a tupu oge Krismas enweghị ike ịme ka ihe mma nke ọrụ ha. Ọzọkwa, ọ bụ ihe na-atọ ụtọ karị ịrụ ọrụ ebe ọ bụghị nanị ọnọdụ ikuku na-achị, ma e nwekwara obere, mana ncheta ezumike dị otú ahụ maka ememe na-abịa.
Utu esi kpoo onu uzo: ígwè (ígwè) na osisi
E nwere ọtụtụ ndị ikom na-ahụ n'anya iji aka ha mee ihe ọ bụla, na-enweghị mmasị ndị nna ukwu na ya. Nye ha, ọ dịghị nsogbu na akwụkwọ ahụaja na-arụ ọrụ, ma dinaa laminate. Ma gịnị banyere ọnụ ụzọ ụzọ? Anyị na-eche na nke a nwekwara ike imere ha, anyị na - achọkwa ịkọrọ ha ndụmọdụ bara uru, na - agwa anyị ka anyị ga - esi na - emeghe ụzọ - ígwè ma ọ bụ osisi, ma kọwaa uru niile na ihe dị iche iche maka ihe nkedo.
Ịmepụta sofa site na pallets mee ya onwe gị
Ihe ụfọdụ na-eju anya site na mmalite ha. Ọ ga - adị ka ị ga - esi na pallets ndị a na - eji eme ihe, nke na - adịghị mkpa ọbụna na azụ ụlọ ahịa. Ọ na - apụta na a ga - ejikwaghachi pallets na - aba uru maka ezinụlọ. Ị nwere ike ịmepụta ngwá ọrụ dị ebube site na osisi ndị a.
Whitewashing bụ nke mbụ elementrị niile arụcha ọrụ na bụ ụzọ dị mma iji nweta ume ụlọ. Otú ọ dị, a na-eji usoro ọgwụgwọ a eme ihe taa. Mgbe ị mere mkpebi iji mee ka ụlọ gị dị ọhụrụ, ọ na-awụsị ụlọ, ọ dị mkpa ịchọpụta otú e si eme ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Taa, anyị ga - agwa gị ụdị ụzọ dị ọcha na ụzọ e si arụzi onwe gị ngwa ngwa ma rụọ ọrụ nke ọma.
Esi mee ka ejiji dị na seramiki na taịlị
Iyi akwa - nsogbu, n'ihi ya, a na-atụkwasịkarị ndị nna ukwu obi. Ma ma e wezụga nke tile n'onwe ya, enwerekwa ihe dị n'etiti etuto ahụ, nke na-achọkwa nhazi. Ma n'oge a, ọ ga-ekwe omume ịme ya n'onwe gị, nke ị nwere ike ịhụ ugbu a n'onwe gị. Nhọrọ nke grout Maka ọgwụgwọ nkwonkwo metụtara ihe ndị dị iche iche dị iche iche, ya bụ: N'okpuru smenti.
N'ileghachi anya na mbụ, o yiri ka ịwụnye mgbọrọgwụ anaghị esiri ike: ọ na-etinye aka n'olulu ahụ dị mkpa iji rụọ ọrụ ahụ, bepụ ya, tinye sink ahụ, jikọọ ya na ntanetị na ngwongwo, na nke ahụ - ị nwere ike iji. N'ezie, otú ọ dị n'ezie, ma e wezụga maka otu "ma."
Ntụkwasị aka na-eme ka a ghara ikpo ọkụ na-ekpo ọkụ n'ala n'okpuru laminate, linoleum na tile
Ebe a na-ekpo ọkụ n'oge a abụghịzi okomoko, kama ọ dị mkpa: ihe ngwọta a na-enye gị ohere ịchịkwa ọnọdụ ihu igwe na ụlọ ma wepụ ọkụ eletrik n'oge oge ọkụ. Na uru, yana ụdị na iwu maka ịwụnye chaa chaa ọkụ ga-atụlekwuo nkọwa. Uru nke ụlọ ọkụ Na ala ụlọ ọkụ bụ nke ọhụrụ: puku afọ ise gara aga, a na-eji usoro ala ọkụ mee ihe na Turkish na baths.
Esi tinye window sill
Emekarị, ntinye nke sill window, slopes plastik na obere mmiri na-eme ozugbo e mebichara windo ahụ. N'ọtụtụ ọnọdụ, ndị a na-eme nke a site na otu ndị na-ewu ụlọ na-arụ ọrụ na-emepụta ígwè-plastic. Mana enwere ikpe mgbe ọ dị mkpa iji aka aka gị wụnye windo windo, na otu esi eme ya n'ụzọ ziri ezi, anyị ga-atụle ya n'isiokwu ahụ.
Ihe dị iche iche si cones na-eme ya onwe gị
Ma eleghị anya, ọ dịghị onye ọ bụla nwara iji aka aka ya rụọ ọrụ ma ọ bụ ọla. Ma nye ụfọdụ, nke a bụ ihe ncheta nke nwata, ebe ọtụtụ ndị anaghị ahapụ ọrụ a ọbụlagodi na okenye. Na mgbakwunye, ọdịdị na-enye anyị ihe niile dị mkpa. Ma ndị kasị ewu ewu na ha bụ, n'ezie, bumps.
Esi mee ka eto eto
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ịma mma na ndị nwe obodo site na osisi ndị dị n'ime ime gị, ị ga-etolite ha. Na ime ya ngwa ngwa n'ụlọ, site na ịhọrọ ụzọ kacha mma. N'isiokwu a, anyị ga-ekwu banyere usoro ndị a na-ewu ewu nke ịka nká nke ihe na usoro ha. Ihe mere na-eto eto ochie Ojuju na-ada ụda, ma ime dị mma karịa osisi, nke na-egbu oge ochie.
Ọka mmiri dị na nkata gị abụghị nanị otu n'ime ụzọ isi mee ka ọnọdụ dị jụụ, nke dị jụụ na mba ahụ, kamakwa ohere iji gbakwunye ekpokọta ekpenyere na nhazi ihu ala. Ị chere na ụdị hydraulic dị otú ahụ karịrị ike gị? I mehiere, anyị ga-agwa gị otu ị ga - esi jiri aka aka gị dụnye ọdọ mmiri, mgbe ị na - etinye ego na mgbalị kachasị mma.
Ngwurugwu na-eme ka mmiri ozuzo na mmiri ozuzo na-adịghị mma n'oge okpomọkụ. A na-eji oche ndị dị ọcha, nke dị ọcha ma dị mma, dochie ha, na-ejupụta n'ụdị dị iche iche na agba nke slabs. Ụdị ahịrị ndị na-emepụta ihe dị iche iche na-eme ka echiche nke mgbagwoju anya nke usoro dum nke ịmepụta ihe ndị dị otú ahụ.